Microsoft Edge Browser တွင် Cookies ကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။
Microsoft Edge browser တွင် cookies များကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။
Microsoft သည် Windows 10 ကို စတင်ရောင်းချသောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် Microsoft Edge ၏ ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုလုံးကို လွှင့်တင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် လုံးဝဂိမ်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ဒီလိုကတိမျိုးတွေကို အရင်ကမြင်ဖူးပြီး သုံးစွဲသူတွေက သံသယဖြစ်နေကြပေမယ့် ထွက်လာတာနဲ့အမျှ လူတိုင်းက နည်းနည်းတော့ အံ့သြသွားကြပါတယ်။ 2019 ခုနှစ်တွင်၊ Microsoft ၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖြစ်သော Edge browser ကို ကမ္ဘာသို့မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး၊ လူတိုင်း၏အာရုံကို ချက်ချင်းဖမ်းစားနိုင်သည်မှာ ဤဘရောက်ဆာသည် Chromium အရင်းအမြစ်ကုဒ်၊ Google Chrome ကို စွမ်းအားပေးသည့် တူညီသောအရင်းအမြစ်ကုဒ်ပေါ်တွင် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Microsoft လုပ်ခဲ့တာက ရိုးရှင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံး ဝဘ်ဘရောက်ဆာကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်များကို မြင်ခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အရသာရှိစေရန် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အွန်လိုင်းလောကတွင် မပြောင်းလဲသေးသော အရာတစ်ခုမှာ ကွတ်ကီးများဖြစ်သည်။ ကွတ်ကီးများသည် သင့်ကွန်ပြူတာတွင် ဝဘ်ဆိုက်များ သိမ်းဆည်းထားသည့် အချက်အလက်အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ ဤကွက်ကီးများကို သင်၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကို ခြေရာခံရန် သို့မဟုတ် အရေးကြီးသောအချက်အလက်များကို ရယူရန်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခု သင်လုပ်ဆောင်လိုသည်မှာ သိသာထင်ရှားသောအချက်မှာ သင်၏ Microsoft Edge browser တွင် cookies များကို disable လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဤအန္တရာယ်အချက်တစ်ချက်ကို လုံးဝဖယ်ရှားပစ်ရန်၊ သို့သော် သင်နားလည်ထားရန်လိုအပ်သည်မှာ အချို့သော website များသည် cookies များကို browser တွင်ဖွင့်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဘရောက်ဆာမှာ cookies တွေကို ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
ဤသင်ခန်းစာတွင်၊ Microsoft Edge browser တွင် cookies များကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်ကိုအတိအကျပြသပါမည်။
1 အဆင့်။ သင်၏ Windows သို့မဟုတ် Mac ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Microsoft Edge ဘရောက်ဆာကိုဖွင့်ပါ။
ဘတ် Google Earth တွင် တည်နေရာမျှဝေနည်း
2 အဆင့်။ ထိုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ သုံး-dot အိုင်ကွန် URL ဘား၏အပေါ်ဘက်ညာဘက်ခြမ်းတွင်။
အဆင့် 3။ 'ကိုနှိပ်ပါသတ်မှတ်ချက်များdrop-down menu ထဲက 'option ။
အဆင့် 4. ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ကွတ်ကီးများနှင့် ဆိုက်ခွင့်ပြုချက်များ tab ကို။
အဆင့် 5. ထို့နောက်ကိုနှိပ်ပါ။ ကွတ်ကီးများနှင့် ဆိုက်ဒေတာကို စီမံခန့်ခွဲပြီး ဖျက်ပါ။ ခလုတ်ကို။
အဆင့် 6. 'ကွတ်ကီးဒေတာကို သိမ်းဆည်းရန်နှင့် ဖတ်ရန်ဆိုက်များကို ခွင့်ပြုပါ' ရွေးချယ်မှုတွင် အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပါ။
၎င်းသည် သင်၏ Microsoft Edge ဘရောက်ဆာ၏ မိတ္တူပေါ်ရှိ ကွတ်ကီးများကို ယခုဖွင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်ဆိုက်များအားလုံးအတွက် ကွက်ကီးများကို ဖွင့်ထားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် သင့်စနစ်တွင် ဒေတာအနည်းငယ်ကို သိမ်းဆည်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထားပါ။
ယခု သင်သည် သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် ဝဘ်ဆိုက်များသို့ အလိုအလျောက် လက်မှတ်ထိုးဝင်ရန် ကူကီးများကို အသုံးပြုလိုပါက၊ 'ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ရှာဖွေခြင်းနှင့် ရှာဖွေခြင်းအတွက် စာမျက်နှာများကို 'ကြိုတင်တင်ခြင်း' ရွေးချယ်မှုကိုလည်း ပြောင်းနိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သော Microsoft Edge ကို ပြန်လည်ရယူရန် မြန်ဆန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်း
နောက်တစ်ခု တူညီသောအကောင့်ကို အသုံးပြု၍ Disney+ ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း လူမည်မျှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း။